आज आमाको मुख हेर्ने दिन, आजै दुई नेपाली आमाले को’रोनालाई जितेर घर फर्किए ! – Khabarhouse
आज आमाको मुख हेर्ने दिन, आजै दुई नेपाली आमाले को’रोनालाई जितेर घर फर्किए !
Khabar house | ११ बैशाख २०७७, बिहीबार १२:४८ | Comments
काठमान्डौ : आज आमाको मुख हेर्ने दिन। आज नै दुई आमाले को;रोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् । काठमाडौंको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्‍ने ८१ वर्षीया वृद्धा को;रोनालाई जितेर घर फर्किएकी हुन्। पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचाररत उनी आफ्ना ५२ वर्षीय छोरोसँगै को;रोनालाई जितेर घर फर्किएकी हुन्।
चैत ४ गते बेलायतको लण्डनबाट आएकी उनी,छोरा र बुहारीमा र्‍यापिड टेस्टमा को;रोना देखिएको थियो। त्यसपछि भएको पीसीआर परीक्षणमा आमा र छोरालाई को;रोना भाइ’रस सं’क्रमण पुष्टि भएको थियो। तर बुहारीमा भाइरसको सं’क्रमण देखिएको थिएन। संक्रमण हटेपछि आमा छोरालाई बिहीबार डिस्चार्ज गरिएको छ।यस्तै सुदूरपश्‍चिमकी को;रोना संक्र’मित वृद्धा पनि कोरोनालाई जितेर आजै घर फर्किएकी छन्।
लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्वर १ घर भएकी महिलालाई आज सेती प्रादेशिक अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको हो । उनको पनि लगातार दुई पटक रिपोर्ट नेगेटिभ आए पछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रबक्ता जगदिश जोशीले जान कारी दिए । उनी विरगञ्जबाट आएर १२ दिन क्वारेन्टाईनमा बसेकी थिईन् भने चैत २२ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो ।